Video: Abdisalaam Cadaay iyo kooxdiisa oo shaley Man UTD kusoo dhaweeyay Oslo - NorSom News
Video: Abdisalaam Cadaay iyo kooxdiisa oo shaley Man UTD kusoo dhaweeyay Oslo
Kooxda Manchester United ayaa shaley marti ku aheyd dalkan Norway, gaar ahaan magaalada Oslo. Halkaas oo ay ciyaar saaxiibtinimo kaga hortageen kooxda Vålerenga iyo laacibka soomaaliga ah ee Abdisalam Abdulqadir Ibrahim (Cadaay).
Man United ayaa u awood sheegatay Vålerenga, waxeyna uga badiyeen sadex gool iyo waxba(3-0). Hoos ka daawo muuqaalka ciyaarta Vålerenga iyo Oslo
Cadaay iyo kooxaha waaweyn ee England:
Abdisalaam Cadaay ayaa sidoo kale sanadkii hore magaalada Stavanger kusoo dhaweeyey kooxda Arsenal, isaga oo markaas u safanayay kooxda Viking. Cadaay ayaa sidoo kale kooxda Liverpool uga hortagay, markii uu u safanayay kooxda Man City.
Previous articleJawaabta Fawzi Warsame ee Listhaug iyo arintii mamnuucista xijaabka
Next articleTolv ugandiske soldatar drepne i al-Shabaab-angrep i Somalia
Keydka NorSom Velg måned august 2020 (17) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)